आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२७ असोज २०७८ बुधबार, १३ अक्टोबर २०२१) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२७ असोज २०७८ बुधबार, १३ अक्टोबर २०२१)
२७ आश्विन २०७८, बुधबार ००:३२
श्रीशाके १९४३ नेपाल सम्वत् ११४१ शरद ऋतु वि.सं. २०७८ आश्विन २७ गते बुधबार तद्अनुसार सन् २०२१ अक्टुबर १३ तारिख आश्विन शुक्लपक्षको अष्टमी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अतिगण्ड योग भद्राकरण आनन्दादिमा श्रीवत्स योग चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः०३ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १७ः३५ मा हुनेछ । बुधाष्टमीव्रत, महाष्टमीव्रत, कालरात्रि, गोरखकाली पूजा ।
मेष – समय शुभ र भाग्यवर्द्धक छ । आरोग्यता बढ्ला । शुभ कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नेछन् । मान महत्व बढ्नेछ । धनसम्पत्ति बढ्नेछ । सुख बढ्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । आफन्त सुख बढ्नेछ । घरपरिवारको स्थिति अनुकूलै रहला । सुख–सुविधाको वस्तु बढ्नेछन् । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा उत्साह थपिनेछ ।
बृष – धन मानसित सम्बन्धित कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ । आफन्तको साथ प्राप्त हुनेछ । आरोग्यता बढ्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा रुचि बढ्नेछ । आर्थिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, तर योजना बनाएर काम गर्नुपर्ला । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन – विश्वास गरेकाबाटै धोका हुन सक्ने भएकोले निराशा बढ्न सक्छ । तथापि रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । व्यस्तता र खर्च बढ्नेछ । लगानी वृद्धि हुनेछ । योजना र बजेट बनाइ काम गर्नु हितकर रहला । जोखिममा नपर्नुहोला । बौद्धिक र रचनात्मक काम भने बन्नेछ ।
कर्कट – ग्रहगोचर शुभ र लाभदायक छ । अन्नधनमा कमी आउने छैन । कार्यमा सफलता मिल्नुसँगै विकासको काम पनि बन्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काममा रुचि बढ्नुसँगै यात्रामा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । जोखिममा नपर्नु उचित हुनेछ ।
सिंह – दिन शुभ र सफलताकारक छ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । यश वर्चश्व बढ्नेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ने छ । आशा उत्साह थपिनेछ । परिवारिक सुखशान्ति वृद्धि हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । नियम कानुनको साथ प्राप्त हुनेछ । योजना र बजेट बनाई कार्य गर्नु बेस रहला । उच्चाधिकारीहरूसँगको व्यवहारमा यश मिल्नेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
कन्या – यात्रामा विशेष ध्यान राख्नुहोला, लामो यात्रा सकभर टार्नु उपयुक्त होला । व्यस्तता बढ्नेछ । परिश्रम बढ्नुको साथै नयाँ कार्यमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । साझेदारीको कार्य बन्नुको साथै नयाँ–नयाँ कार्यमा पनि प्रगतिको बाटो बलियो बन्ने छ । जीवनसाथीको सुख–सहयोग पाउनुहुनेछ । रसरागमा आकर्षण गर्नेछ । मिठो भोजन पाउनुहुनेछ । मान प्रशंसा होला । ख्याति फैलिनेछ । लेखनप्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ ।
तुला – ऋण रोग र शत्रुप्रति ध्यान राख्नुपर्नेछ । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । साझेदारीको काम बन्नेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नुको साथै शत्रुलाई पनि जित्नुहुनेछ । रोकिएको काम बन्नेछ र नयाँ कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । विजयश्री मिल्नुको साथै सुख–समृद्धि पनि बढ्नेछ । आलश्य नगरी समयबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनुहोस् । घरपरिवारको स्थितीमा सुधार हुनुको साथै कार्य व्यापारमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । मान महत्वमा कमी आउनेछैन ।
वृश्चिक – ऋण, रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । प्रेमको क्षेत्रमा सफलता पाउनको लागि अत्यन्तै अनुकूल छ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । इष्टमित्र सन्तान आदिद्वारा सहयोग मिल्नेछ । कला साहित्य संगीत गीत रसरागसित सम्बन्धित कार्यमा सफल रहनुहुनेछ । रचनात्मक र कलात्मक कार्यमा सफलताको साथै साथीभाइबीच आमोदप्रमोदमा हुनेछ । आनन्द बढ्नेछ । सुख शान्तिमा वृद्धि होला । प्रेमपात्रको साथ पाइनेछ ।
धनु – देखापरेको समस्याको समाधान मिल्नेछ । आम्दानी बढ्नेछ । यात्रा हुनेछ । भागदौड र व्यस्तता बढ्नेछ । अरूको भरमा बस्नु उचित हुनेछैन । आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु बेस रहला । विवाद आदिका समाधान प्राप्त हुनेछ । ठूलो रकमको लगानीको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कागजपत्र माथि हस्ताक्षर गर्दा सचेत रहनुपर्नेछ । आयस्रोत बढ्नाले आर्थिक समस्या समाधान हुनेछ ।
कुम्भ – बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्ने छ । दायित्व पूरा गर्नुहुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । भोजभतेरमा भाग लिनुहुनेछ । आर्थिक वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । सभा र समारोहमा मान पुरस्कारको प्राप्ति होला । दरिद्री भागेर आर्थिक उत्थानको बाटो देखापर्ला । उच्चाधिकारीको साथ मिल्नेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । गौरव बढ्नेछ ।
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (७ कात्तिक २०७८ आइतबार, २४ अक्टोबर २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ शरद ऋतु वि.सं. २०७८ कार्तिक ७
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (६ कात्तिक २०७८ शनिबार, २३ अक्टोबर २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ शरद ऋतु वि.सं. २०७८ कार्तिक ६
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (५ कात्तिक २०७८ शुक्रबार, २२ अक्टोबर २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सम्वत् ११४१ शरद ऋतु वि.सं. २०७८ कार्तिक ५
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (४ कात्तिक २०७८ बिहीबार, २१ अक्टोबर २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ श्रीसूर्योदक्षिणायने शरद ऋतु राक्षसनामक संवत्सर वि.सं.
ग्लोबल आइएमई बैंकको २८२औँ शाखा मंगलबजारमा